Kirira varieties | Tantsaha anaty aterneto | November 2019
Sokajy Kirira varieties
Ny karazany tsara indrindra amin'ny voatabiha voatabiha
Ny tanindrazan'ny tsaramaso kiriodana dia heverina fa Amerikana Atsimo, na ny firenena Peroa. Ny teny hoe kiriry dia fandikana ny teny anglisy hoe cherry, izay midika hoe "manitra". Ireo voatabia ireo dia manamarina tanteraka ny anarana, satria kely noho ireo karazana voatabia mahazatra. Ireo voatabia ireo dia tena mahafinaritra ary efa lasa zatra amin'ireo mpitrandraka anay.
Ny karazam-bolo tena marevaka indrindra
Ny saham-boankazo tsy mamokatra dia tsy vitan'ny hoe asa iray mahavokatra, fa iray ihany koa aesthetic. Ireo hazo matanjaka sy marevaka marevaka, manjelanjelatra maitso maitso tsara tarehy any amin'ny masoandro ary mahafinaritra ny maso amin'ny karazana sela isan-karazany avy amin'ny volomparasy volamena ho maroon, mainty mainty. Angamba tsy ny zaridaina rehetra no mahafantatra fa tonga eto Eoropa ity hatsaran-tarehy atsimo ity alohan'ny androntsika.
Karazana varim-bary ho an'ny tarika afovoany
Ny fanokafana ny vanim-potoan'ny fahavokarana fahavaratra dia manomboka amin'ny cherry mahafinaritra mahafinaritra. Heverina fa ny serizy mamy dia orinasa mpamokatra hafanana izay mitombo hatrany any amin'ny faritra atsimo. Mandalo ny fotoana, ary tsy milamina ny siansa. Misaotra noho ny asa tsy misy dikany ny mpamboly, efa ela no nipetrahan'ny hatsaran-toetr'andro any amin'ny toerana misy anay.
Toetrandro mafana sy mamomamo: ny famaritana sy ny toetoetran'ireo karazana kiriodana mamy "Fatezh"
Indraindray ianao tsy te hividy tsaramaso (tsaramaso tsimokaretina) ao amin'ny bazaar, satria tsy misy olona mahafantatra marina ny toerana sy ny fepetra nipoiran'ireo voankazo ireo. Noho izany, maro ireo zaridaina mikaroka karazana kerobima toy izany, izay mety hanome vokatra tsara ao amin'ny faritra Moskoa sy faritra hafa any avaratra andrefana. Mpikaroka no nikarakara an'io, ary vao haingana dia nisy karazan-tsaka hafa avy amin'io hazo io - Fatezh cherries.
Cherry Sweet "Ovstuzhenka": ny toetra, ny fanamafisana, ny tsiambaratelon'ny fambolena
Cherry Sweet "Ovstuzhenka" dia karazany malaza. Ny famaritana azy dia tsy mamela tsy miraharaha, satria ny hazo dia manana fandaniana tsara, fandeferana tsara ny andro mangatsiaka sy ny tsirony tsara. Ny tantaran'ny fambolena "Ovchuzhenka" dia karazana tsaramaso marevaka, izay misy ny vokatra amin'ny vanim-potoana miteraka.
Chermashna Cherry: ny toetra, ny fiantraikany ary ny fiantraikany
Ankehitriny, ireo tia ny serizy mamy mena sy volomparasy manga sy volomparasy dia afaka mankafy ny tsirony tsy hay hadinoina amin'ny namany - jiro mavo. Betsaka ny voankazo mavo, noho izany dia hojerentsika ny iray amin'ireo olona malaza indrindra - Cherry Cherchey mamy. Diniho ny toetra mampiavaka ny karazana tsindrin-tsakafo, ary jereo koa ny fomba nahazoan'io cherry mahafinaritra io nahazo ny toerana misy ireo mpamboly za-draharaha.
Cherry "Julia": ny toetra, ny fiantraikany ary ny fiheverana
Kirira mamy "Julia" dia hazo avo be izay misy voa tsara sy mamy, malaza amin'ny mpamboly any amin'ny faritra avaratra sy ny faritra mainty hoditra. Ny sela Yulia cultivar dia nahazo ny toeram-pambolena experimental tany Rossosh (faritra Voronezh) avy amin'ny voa avy amin'ny zavamaniry mena Gin ao an-toerana taorian'ny fialokalofana tamin'ny kiriolona Denissen.
Kirira mamy malefaka "Valeriy Chkalov": toetra
Cherry mamy dia iray amin'ireo voaloboka mafana voalohany izay efa ela no niandry taorian'ny ririnina. Saingy tsy amin'ny faritra rehetra dia mitondra vokatra tsara ihany koa izy. Noho izany, tokony handinika manokana ireo karazana ririnina ireo ianao. Ny iray amin'ireo solontenan'io karazana io dia Valery Chkalov, cherry mamy. Ny tantaran'ny fambolena an'i Cherries "Valery Chkalov" dia nalaina tamin'ny fomba fifidianana malalaka tamin'ny taonjato fahafito tamin'ny taonjato faha-20.
Kiraro mamy "Pink pearl": ny toetra, ny tombony ary ny tsy fahampiana
Kirira mamy dia natoraly multivitamine voajanahary, izay ahitana ny zavatra rehetra ilaina sy ny zavatra mifandray amin'ny sakafo mahavelona. Maro amintsika no mankafy io voankazo io miaraka amin'ny fahafinaretana manokana, satria ny vokatra dia tsy salama, fa tena mahafinaritra ihany koa. Ny famaranana maoderina dia nanome fahafahana haniry tsaramaso ao amin'ny tendrony atsimo sy mafana, izay tena mahomby amin'ny karazana "Pink Pearl".
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Kirira varieties